Ntuziaka Tech 3 kacha elu maka ndị mbipụta na 2021 | Martech Zone
Ntuziaka Tech 3 kachasị maka ndị nkwusa na 2021
Tuzdee, Machị 30, 2021 Monday, March 29, 2021 Jeff Kupietzky
Afọ gara aga siiri ndị nkwusa ike. N’iburu ọgba aghara nke COVID-19, ntuli aka, na ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze, ọtụtụ mmadụ ejirila ọtụtụ akụkọ na ntụrụndụ karịa afọ gara aga karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Ma ha nwere obi abụọ banyere isi mmalite na-enye ozi ahụ erutewokwa oge kachasị elu, dịka na-ebili na-aghaghi ugha kpaliri ntụkwasị obi na mgbasa ozi mmekọrịta na ọbụlagodi ọchụchọ iji dekọọ obere.
Nsogbu a nwere ndị nkwusa n'ofe niile nke ọdịnaya na-agbasi mbọ ike ịchọpụta otu ha nwere ike isi nwetaghachị ntụkwasị obi ndị na - agụ akwụkwọ, mee ka ha tinye aka ma chụpụ ego ha nwetara. Ihe mgbagwoju anya, ihe a niile na-abịa n'otu oge mgbe ndị mbipụta akwụkwọ na-ejikwa ọnwụ nke kuki ndị ọzọ, nke ọtụtụ dabere na ndị na-ege ntị na-elekwasị anya iji nyefee mgbasa ozi na-eme ka ọkụ na sava na-arụ ọrụ.
Ka anyị banyere afọ ọhụrụ, nke anyị niile nwere olile anya agaghị enwe ọgba aghara, ndị na-ebipụta akwụkwọ ga-echigharịkwuru teknụzụ nke na-enyere ha aka ịjikọ ndị na-ege ntị ozugbo, iji belata onye mgbasa ozi mmekọrịta na ijide ma leverage data onye ọrụ ndị ọzọ. . Ndị a bụ usoro atụmatụ atọ ga - enye ndị na - ebi akwụkwọ aka ka ha wuo usoro data nke ndị na - ege ha ntị ma kwụsị ịdabere na isi ndị ọzọ.
Nzuzo 1: Nhazi nke Oke.
Ndị nkwusa enweghị ike ịtụ anya n'ezie na oke mgbasa ozi ga-aga n'ihu. Ndị na-eri ihe erikpuola ọtụtụ ozi, ọtụtụ na-ebelata maka ahụike ọgụgụ isi ha. Ọbụna maka ntụrụndụ na ibi ndụ mgbasa ozi, ọ dị ka ọtụtụ ndị nwere ndị na-ege ntị eruola oke oke. Nke ahụ pụtara na ndị nkwusa ga-achọ ụzọ iji dọta uche ndị debanyere aha ma mee ka ha laghachi.
Nyefe ọdịnaya ahaziri ahazi bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji mee nke ahụ. N'iji ọtụtụ ihe, ndị na-azụ ahịa enweghị oge ma ọ bụ ndidi iji dozie ya niile iji chọta ihe ha chọrọ ịhụ, yabụ na ha ga-agbadoro gaa na ntanetị nke na-edozi ọdịnaya ha. Site n'inye ndị debanyere aha karịa ihe ha chọrọ, ndị nkwusa nwere ike iwulite ntụkwasị obi karịa, mmekọrịta dị ogologo oge na ndị debanyere aha bụ ndị ga-adabere na ndị na-eweta ọdịnaya kachasị amasị ha ka ha ghara iji oge ha nwere ọdịnaya dị oke mkpa ha na-achọghị ịma.
Usoro 2: Ohere ndị ọzọ maka Teknụzụ AI
N'ezie, ịnyefe ọdịnaya nke ahaziri iche na onye ọ bụla debanyere aha agaghị ekwe omume na-enweghị akpaaka na teknụzụ ọgụgụ isi iji nyere aka. Ngwurugwu AI nwere ike ịdebe omume ndị na-ege ntị na saịtị-ịpị ha, nyocha na ntinye aka ndị ọzọ-iji mụta ihe masịrị ha ma wuo eserese njirimara njirimara maka onye ọrụ ọ bụla.
N'adịghị ka kuki, a na-ejikọ data a na onye ọ bụla dabere na adreesị ozi-e ha, na-enye usoro ọgụgụ isi ziri ezi, nke ziri ezi na nke a pụrụ ịdabere na ya. Mgbe ahụ, mgbe onye ọrụ ahụ batara ọzọ, AI na-amata onye ọrụ ya ma na-arụ ọrụ na-akpaghị aka nke akụkọ ihe mere eme dọtara itinye aka. Otu teknụzụ ahụ na-enyekwa ndị nkwusa ohere izipu ọdịnaya a ahaziri nke ọma na ndị debanyere aha site na ọwa dị iche iche, gụnyere email na ọkwa ịkwanye. Oge ọ bụla onye ọrụ pịrị na ọdịnaya, sistemụ na-aka amamịghe, na-amụtakwu banyere ihe masịrị ha ịmezi nhazi nke ọdịnaya.
Nzuzo 3: Mgbanwe Gbanwee Nzuzo Data
Chọpụta otu esi edozi ọnwụ nke kuki bụ naanị akụkụ nke agha ahụ. Ruo ọtụtụ afọ, ndị nkwusa tụkwasịrị obi na mgbasa ozi mgbasa ozi iji kesaa ọdịnaya ma wuo obodo nke ndị debanyere aha ha. Agbanyeghị, n'ihi mgbanwe na atumatu Facebook, edepụtara ọdịnaya ndị mbipụta, ma ugbu a, ọ na-ejidekwa data data ndị na-ege ntị. Ebe ọ bụ na nleta ọ bụla na saịtị Facebook bụ ntụgharị okporo ụzọ, Facebook naanị na-ejide data ndị na-ege ntị, nke pụtara na ndị nkwusa enweghị ụzọ ha ga-esi mụta ihe gbasara mmasị na mmasị ndị ọbịa ahụ. N'ihi ya, ndị nkwusa enweghị enyemaka iji ha ọdịnaya ha maara nke ndị na-ege ntị chọrọ.
Ndị nkwusa ga-achọta ụzọ isi gbanwee ntụkwasị obi na njem ntinye aka nke ndị ọzọ a ma wuo ebe nchekwa data nke ndị na-ege ha ntị. Iji 'data a nwere' iji mee ka ndị na-ege ntị nwee ọdịnaya nke onwe ha dị mkpa karịsịa ka ịtụkwasị obi na Facebook na nyiwe mmekọrịta ndị ọzọ. Akwụkwọ ndị na-anaghị etinye ụzọ iji nakọta ma jiri data ndị na-ege ntị nyefee ọdịnaya nke ahaziri iche ga-efunahụ ohere iji rute ma soro ndị na-agụ akwụkwọ ma mee ka ha nweta ego.
Ọ bụ ezie na anyị niile na-anwa ịchọta etu anyị ga-esi na-agagharị na "ọhụụ ọhụrụ" ahụ, otu ihe mmụta emeela ka o doo anya: otu ndị na-eme atụmatụ maka ihe a na-atụghị anya ya, na-ejigide mmekọrịta dị otu n'otu na ndị ahịa ha, nwere nke ka mma Ohere inweta ihu igwe n'agbanyeghị mgbanwe ọbụla nwere ike ịbịa. Maka ndị nkwusa, nke ahụ pụtara ibelata ntụkwasị obi na ndị ọzọ na-eje ozi dị ka ndị nche ọnụ ụzọ dị n'etiti gị na ndị debanyere aha gị na kama iwu ma leverage data nke ndị na-ege gị ntị iji nyefee ọdịnaya nke aha ha.
Tags: aiteknụzụ teknụzụdatausoro dataFacebookkeonwenkwusaPublishingusoro teknụzụTechnologyatụmatụ teknụzụ
Jeff na-eje ozi dị ka onye isi nke PowerInbox, ụlọ ọrụ teknụzụ ọhụụ na-enyere ụlọ ọrụ aka iwepụta akwụkwọ akụkọ email ha site na ọdịnaya dị ike. Tupu ya abanye na PowerInbox, Jeff jere ozi dị ka Onye isi ala na onye isi oche na Oversee.net, na-achịkwa ọrụ zuru ụwa ọnụ na iwu ngalaba aha Oversee nwere ma rụọ ọrụ n'ime otu n'ime ụwa kachasị ukwuu, na-ehiwe ụlọ ọrụ ahụ dị ka onye isi na Internet real estate. N'okpuru nduzi ya, ụlọ ọrụ ahụ dị iche iche n'ọgbọ na-edu ndú, na-ewu ọtụtụ nnukwu ụlọ na azụmaahịa dị elu. Tupu nke ahụ, Kupietzky rụrụ ọrụ n'ọkwá onye isi na X1 Teknụzụ, Digital Insight (Intuit), Siebel Systems (Oracle), na Loudcloud / Opsware (Hewlett-Packard). Jeff malitere ọrụ ya dị ka onye ndụmọdụ maka McKinsey & Co., na-emepe atụmatụ azụmaahịa maka ngwanrọ, mkpuchi na ndị ahịa ụlọ akụ. Onye na-ekwu okwu mgbe niile na ogbako Digital Media, egosipụtakwala ya na CNN, CNBC, na n'ọtụtụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ azụmahịa.
Eke Ọgba: Edemede A Google Autosuggest wepụ nke Trends maka Niche Search Keywords
Calculator: Kwuo Otú Nyocha Gị N'ịntanetị Ga-esi Gbasa Ahịa